SABABTOO AH CUDURRADA IFILADA AH EE U DHEXEEYA UKRAINE IYO EU, AYAA XAYIRAADAHA GOBOLKA LAGU SOO ROGAY - UKRAINE
Sababtoo ah cudurrada ifilada ah ee u dhexeeya Ukraine iyo EU, ayaa xayiraadaha gobolka lagu soo rogay
Komishanka Yurub ayaa go'aan ka gaadhay in la dhiso xuduudaha gobolka ee u dhexeeya Ukraine iyo Midowga Yurub marka ay timaado ganacsiga dalaga digaaga, kaas oo diiwaan geliyay cudurrada fayraska ah ee ba'an - hargabka avian. Waxaad ka ogaan kartaa wax badan oo ku saabsan go'aankan ku jira qoraalka rasmiga ah ee Midowga Yurub.
Xusuusnow in soo dejinta ukumaha ukumaha iyo ukumaha Ukriga la joojiyay EU bishii December sanadkii hore, laakiin kadib, 30kii Janaayo, dhoofinta dib-u-billowday, saameyn ku yeelatay alaabta ka soo jeeda goobaha hargabka aan la arkin. Faafidda ugu horreysa ee hargabka shimbiraha ah ee ka dhacda Ukraine sannadka 2016 ayaa diiwaangaliyay dhakhaatiirta xoolaha 30kii Nofeembar ee gobolka Kherson. Jawaabta, 6-da December, 2016, Midowga Yurub uma oggolaan soo dejinta hilibka digaaga ee Ukraine.
Bilowga Jeenawari 2017, dillaaca cusub ee cudurka ayaa lagu ogaaday gobollada Chernivtsi iyo Odessa. Sidaas awgeed, Belarus iyo Hong Kong ayaa sidoo kale ku soo rogay xaddidaad ku saabsan soo dejinta hilibka digaaga iyo ukunta ee meelahaas.